ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3တစ်ဦးကပထမဦးစွာနေ့စွဲတွင်သင့် Puppy ကိုမယူအကြောင်းပြချက်
တစ်စုံတွဲသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း, မိတ်ဆွေတစ်ဦးအကြှနျုပျကိုနာမည်တစ်ခုနှင့်ဖုန်းနံပါတ် ပေး. သူမ၏မိတ်ဆွေငါ့ကိုခေါ်နှင့်သူမ၏ထွက်မေးမြန်းဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ဟုဆိုသည်. ငါဟာပြင်ကစားပျော်စရာပထမဦးဆုံးနေ့စွဲပါလိမ့်မယ်ထင်. ကျနော်တို့ဟာပျော်ပွဲစားယူမယ်လို့, စပျစ်ရည်ကိုပုလင်း, အတူတူအဆင်းလှသောနွေရာသီညဦးယံအချိန်စောင်နှင့်ပျော်မွေ့. ငါ၌ရှိသမျှသောအကြောင်းတရား.
ဒီကပင်မျက်စိကန်းရက်စွဲခွေးပေါက်လေးတစ်ကောင်ဟာ adore ထိုင်နေသောငါနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ဖြစ်လေ 10 တစ်ပတ်ဟောင်းရွှေ retrieval. ငါတလျှောက်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏ထို့ကြောင့်ဤသာရက်စွဲမှထည့်ပါမယ်လို့ထင်. အဲဒီအစား, တစ်အာရုံဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်သည်ငါ့ပျော်စရာနည်းနည်းရဲ့ buddy. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲပေါ်တွင်သင်၏ခွေးကလေးကိုမယူသုံးအကြောင်းရင်းများမှာ:
ကျနော်တို့တကယ်အသီးအသီးအခြားသို့ရနိုင်ဘယ်တော့မှခဲ့ကြ. ခွေးပေါက်စ, ယေဘုယျအားဖြင့်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, အလွန်ကြီးစွာသောစကားပြောဆိုမှုစတင်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းကသူဖြစ်ခဲ့အသက်ဘယ်လောက်တောင်းရန်စေချင်ကြောင်းဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်.
3.Puppy poo အတိအကျတစ်ခုအာဏာပိုင်မဟုတ်ပါဘူး
သင်တစ်ဦးအဟောင်းတွေကိုခွေးရှိပါက, ထို potty အားလပ်ချိန်နည်းတဲ့ဖြစ်လေ့ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါအဘယ်မှာအဲဒီဖြစ်ပျက်သင်အနည်းငယ်ပိုမိုထိန်းချုပ်ရှိသည်.
ညဉ့်အခါအဆုံးမှာ, ငါသည်ငါ့နေ့စွဲကိုသိရန်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်တူငါတကယ်မခံစားရဘူး. ခွေးတင်ဆောင်လာသောမှသည် (သူသေးသော leash အပေါ်လမ်းလျှောက်တတ်ဖို့သင်ယူမပြောစဖူးကတည်းက) သူစိတ်ဝင်စားတကျွန်းတနိုင်ငံသားရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူရှိ၏အသက်ဘယ်လောက် sharing မှထိုသူနောက်သို့လိုက်တက်သန့်ရှင်းရေးမှ, ငါညဉ့်လုံးအလုပ်လုပ်ခြင်းထက်ကောင်းတဲ့မိန်းမပျိုသိကြှမျးခဲ့တူခံစားခဲ့ရ. အဘယ်သူမျှမကဒုတိယရက်စွဲရှိခဲ့သည်, ငါမူကားတစ်ဦးတန်ဖိုးရှိသောသင်ခန်းစာ. တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်အိမ်မှာခွေးကလေး Leave.
ပထမဦးစွာချိန်းတွေ့နိဒါန်း Making တွင်ရဲ့ Do and DON'Ts